Uhulumende Ubeka Eceleni I-$100 Million Yokhetho
Umphathintambo wezemali, uMnu. Tendai Biti uthi uhulumende beke eceleeni imali engaba yizigidi ezilikhulu zamadollar-$100 million elakho ukusetshenziswa kukhetho lokudinga uMongameli lamalunga edale lephalamende le Senate nxa luthe lwenziwa.
UBiti utshele iphephandaba le The Sunday Mail ukuthi limali ngeyasala esikhwameni seSpecial Drawing Rights ilizwe elayiphiwa yinhlanganiso ye International Monetary Fund ukwenqabela ukugugudeka komnotho womhlaba ngomnyaka ka 2009.
Alikaqanjwa kodwa ilanga lokhetho uMongameli Robert Mugabe athi ufuna lwenziwe lonyaka, amanye amabandla esithi kumele lwenziwe sekuhlelwe umhlahlandlela wokhetho. Kodwa okukhanya kumgceke yikuthi lolukhetho alusoze lwenziwe kungakafiki inyanga kaNhlangula womnyaka ozayo.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnu. Effie Dlela Ncube, utshele iStudio 7 ukuthi imali ekhulunywa ngu Biti kayisoze yenele.